(၁၉၉၆) ခုနှစ်က မိသားစု ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ Oasix – အနုပညာရပ်ဝန်း
(၁၉၉၆) ခုနှစ်က မိသားစု ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ Oasix
ပရိသတ်ကြီးရေ မန္တလေးသား Rapper လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Oasix ကတော့ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်တွေ အသည်းစွဲအားပေးနေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ သူရေးသား သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားခဲ့ကြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်တဲ့ ကိုကြီး ၊ ခေး အစရှိတဲ့ သီချင်းတွေကလည်း လူငယ်တွေကြားမှာ ဝက်ဝက်ကွဲ ပေါက်ခဲ့တာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ ။
Oasix ဟာ သူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို ပရိသတ်တွေကို အမြဲ မျှဝေပေးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်တွေ မပြုံးဘဲ မနေနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ (၁၉၉၆) ခုနှစ်လောက်က မိသားစု ရှင်ပြု ရဟန်းခံ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ ပရိသတ်အချစ်တော် အိုအေစစ်ကို အသက် (၃) နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက် အဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး လွမ်းမောဖွယ်ရာ တစ်ခါက မန္တလေးမြို့ကြီးနဲ့အတူ အိုအေစစ်ရဲ့ နောက်ခံစကားပြောသံကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် ရယ်မောပျော်ရွှင်စေမှာ အသေချာပါပဲ ..။
အိုကြီးရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ (၃) နှစ်သားကလေးလေး Oasix ကို တအားကို သဘောကျနေကြပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှုသူတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ် ။ အိုကြီးကိုချစ်တဲ့ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရယ်မောပျော်ရွှင်စေဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနော် ။
1996 Memories ?
၁၉၉၆ ခုနှစ်က ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ Memories လေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ် ?
Posted by Oasix on Saturday, 26 September 2020
မန္တလာမြေရဲ့အငွေ့သက်တွေ တဝကြီးခံစားရမယ့် G-fatt ရဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီး သီချင်း Music Video
ဒါရိုက်တာ ထူးပိုင်ဇော်ဦးရဲ့ ဖခင်Covid-19 ကူးစက်ခံရပြီး ကွယ်လွန်